‘बालबालिकालाई चिसोबाट बचाऔं’
विराटनगर । अभिभावकहरु सचेत भए बालबालिकालाई धेरै रोगहरुबाट बचाउन सकिने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । अभिभावकबाट प्रयाप्त समय पाउने बालबालिकाहरु अरुभन्दा निरोगी हुने मत उनीहरुको छ ।
अभिभावकले बालबालिकालाई विशेष समय दिँदा सरसफाइमा उचित ध्यान पुग्ने, खानपान र हेरचाह हुने भएकोले संक्रमणको जोखिम कम हुने वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. सुरेशप्रसाद साहले बताउनुभयो । ‘अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई प्रयाप्त समय दिने र सरसफाईमा ध्यान दिने हो भने आधा भन्दा बढी रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ,’ डा. साहले भन्नुभयो । धेरै अभिभावक बालबालिकासँगै भएरपनि उनीहरुको सरसफाई र खानपानमा आवश्यक ध्यान नदिँदा धेरै प्रकारका समस्याहरु देखिने गरेको उहाँको अनुभव छ ।
सरकारले बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारको पक्षमा थुप्रै कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको भएपनि अभिभावकहरुमा स्वास्थ्य चेतनाको अभावमा रहेको पाइन्छ । बालबालिकाहरुलाई चिसो मौसममा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भएपनि अभिभावकहरुले प्रयाप्त ध्यान नदिँदा बालिबालिकामा थुप्रै प्रकारका समस्याहरु हुने गरेको छ ।
जाडोको समयमा बालवाकिलाहरूमा रुघाखोकी (फ्लु), स्वासप्रश्वासको समस्या, कोल्ड डाइरिया, निमोनिया, टन्सिल र छालाको समस्या बढी देखिने गरेको चिकित्सक साहले बताउनुभयो । यस्तो बेलामा अभिभावकले विशेष ध्यान नदिएमा समस्या बढ्दै जाने र बालबालिकाहरु जोखिममा पर्ने गरेका छन् । टन्सिलको संक्रमणको समयमै उपचार नभए मुटुमासमेत असर पुग्ने भएकोले विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ । छाला सुख्खा हुन नदिन तेल वा लोसनको प्रयोग गर्न चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
मंसिर महिनाको सुरुवातबाट देशभरको तापक्रम घट्दै गएको छ । चिसो बढेपछि बालबालिका र वृद्धहरुमा विशेषगरी स्वासप्रस्वासको समस्या देखापर्छ । त्यसबाट जोगाउन तातो कपडा लगाउने, प्रयाप्त झोल पदार्थ खुवाउने, नियमितरुपमा नूनपानीले कुल्ला गर्न लगाउने, बेलाबेलामा बाफ लिन लगाउने, १० वर्ष माथिका बालबालिकालाई कागती, सुन्तला जस्ता फलफुल अलिबढी खान दिने र फ्रिजमा राखेको कुरा बर्जित गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
जाडो महिनामा सामान्य संक्रमण बाहेक हाइपोथर्मिया, फ्रस्टबाइट, कार्बनमोनोअक्साइड पोइजनिङ जस्ता रोगहरु देखा पर्ने भएकोले स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारले बालबालिकाहरु अधिकारको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिएको छ । साधन स्रोतले भ्याएसम्म शिक्षा, स्वासथ्य, अधिकार रक्षा आदिमा सरकारले काम गर्दै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री घोषणा गर्दै बालश्रम, शोषण, बालविवाह, भेदभाव आदिको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्ने, वाल स्वास्थ्य, पोषण तथा खोप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ ।
शुक्रबार, ०५ मंसिर, २०७७, बिहानको १०:३० बजे
दाहालको पक्षमा सात, ओलीलाई पौडेलको साथ
विराटनगर । नेकपा बैठकमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच भनाभन भएपछि ओलीको प्रस्तावमा महासचिव विष्णु पौडेलले मात्रै समर्थन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बैठकको औचित्यै नभएको भनेपछि त्यस विषयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो